राइजिङलाई अत्तरिया कपको उपाधि | Hamro Khelkud
राइजिङलाई अत्तरिया कपको उपाधि
धनगढी (हाम्रो खेलकुद) – कैलालीको अत्तरीयामा जारी रुस्लान अत्तरीया कपको उपाधि राईजिङ क्रिकेट वुमनले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई १६ रनले पराजित गर्दै राइजिङले उपाधि हात पारेको हो।
टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको राइजिङले निर्धारित २० ओभर खेल्दै ५ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ५२ रनको योगफल खडा गरेको थियो। राइजिङका लागि पुजा निभा भाटले ३८ बलमा ३७ रन बनाएँ भने साम्पा मुखर्जीले १८ बलमा २३ रन जोडिन। सहनाज प्रविन १ रन प्रति बल २५ रन जोड्दा शान्तिले १४ बलमा अविजित २१ रनको आक्रामक पारी खेलिन्। एपीएफका लागि सरिता मगरले ३ विकेट तथा करुणा भण्डारीले २ विकेट लिएका थिए।
जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको एपीएफले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय ३६ रनमात्र बनाउन सकेपछि उपविजेतामै सिमित हुन पुग्यो। एपिएफकी पुजा पाण्डेले ४२ बल खेल्दै ५ चौकाको मद्दतले ४८ रन बनाएपनि आफ्नो टिमलाई जित भने दिलाउन सकिनन् । त्यस्तै एफिएफकी करुणा भण्डारीले २४ र सरिता मगरले २१ रन बनाएपनि बाँकी खेलाडीले भने दोहरो अंकको रन बनाउन सकेनन । एपिएफलाई सस्तैमा समेट्न राईजिङ्ग क्रिकेट वुमन काठमाण्डौकी पुजा निमाभाटले ४ ओभरमा १७ रन खर्चिदै ४ विकेट हात पारिन ।
विजयी टोली राइजिङले ट्रफीसहित नगद रु. २ लाख जित्यो भने उपविजेता टोली एपीएफले रु. १ लाखमा चित्त बुझायो। प्रतियोगितामा ४ विधा अन्तर्गत व्यक्तिगत पुरस्कार पनि वितरण गरिएको थियो।